Tsy manan-tany, tsy misy trondro: miady amin’ny fandrahonana roa sosona ny vondrom-piarahamonina Mekong any avaratra atsinanan’i Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2019 4:54 GMT
Rit Chansuk, 50 taona, iray amin'ireo tantsaha maro izay nandà ny fiampangana fa nisalovana tany tao amin'ny Valan-javaboarim-pirenena Pha Taem ao Ubon Ratchathani. Saripika sy fanazavana avy amin'ny The Isaan Record
Ny lahatsoratra avy amin'i Panumas Sanguanwong nasiam-panovana dia avy amin'ny The Isaan Record, tranonkalam-baovao mahaleotena iray ao Thailandy, ary navoakan'ny Global Voices indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizaram-baovao.
Manontany tena ny antony hanenjehana azy ireo amin'ny fambolena izay nolovain'izy ireo tamin'ireo ray aman-dreniny ireo mponina ao Ubon Ratchathani any avaratra atsinanan'i Thailandy.
“Aleoko maty raha ho lasan'olona ny taniko. Tsy te-ho velona aho,” hoy i Rit Chansuk, 50 taona, mangovitry ny fihetseham-po ny feony rehefa nijery ny velaran-tany mirefy 0.32 hektara izay ho alaina aminy izy.
Iray amin'ireo mponina maro voampanga ho nisalovana ny tany tao amin'ny Valan-javaboary Nasionaly Pha Taem ao Ubon Ratchathani i Rit. Teraka tao amin'ny faritra be tendrombohitra izay fantatra amin'ny vatolampy ara-javakanto tranainy sy ny hantsam-bato eo ambonin'i Mekong talohan'ny nanambarana izany ho valan-javaboarim-pirenena tamin'ny taona 1991 izy.
Namboly teto amin'ity tany ity izahay hatramin'ny andron'ny ray aman-dreninay, talohan'ny nanovana an'i Pha Taem ho valan-javaboarim-pirenena mihitsy aza izany.
Tamin'ny taona 2014, nanome baiko ny fitondrana miaramila teo ambany fitarihan'ny Filankevitra Nasionaly ho an'ny Fandriampahalemana sy ny Filaminana (NCPO) fa ho alaina amin'ireo mpisalovana ny faritry ny ala mba hampitomboana ny faritry ny ala ho 40 isanjato na mihoatra ny 4,35 tapitrisa hekitara. Olona maherin'ny 28.000 no nenjehina nanomboka tamin'io ka hatramin'ny volana Septambra lasa teo noho ny fisalovanana ny ala, izay mitotaly manodidina ny 131.200 hekitara.
Any amin'ny ilany avaratra-atsinanana, manohitra ny fandroahana eo amin'ny taniny ireo vondrom-piarahamonina monina anaty ala izay nambaran'izy ireo fa taniny nifandimbiasan'izy ireo tamin'ny taranaka fara mandimby.
Hatramin'ny sakelidrano ka hatramin'ny tany fambolena
Teraka tao amin'ny tanànakely Ta Mui ao amin'ny zana-paritr'i Huai Phai ao amin'ny distrikan'i Khong Chiam ao Ubon Ratchathani i Rit . Nambarany fa nandova ilay tany izay resahina eto izy miaraka amin'ny zokiny roalahy avy amin'ny ray aman-drenin'izy ireo.
Sakelidrano feno vatolampy ity faritra ity fahiny . Koa satria tsy nisy tany firy dia vary fotsiny no nambolenay. Taty aoriana, nanomboka namindra ny vatolampy izahay, namorona lavaka niaraka tamin'ireo vatolampy mba hakana tany, ary nanomboka lasa tanimboly izay hitantsika ankehitriny izany.
Tamin'ny taona 2015 nanao fanadihadiana momba ny fananan-tany ny tompon'andraikitry ny Valan-javaboarim-pirenena Pha Taem, taorian'ny politikan'ny famerenana ny ala nataon'ny governemanta. Hitan'izy ireo fa nisalovana ny valan-javaboary ny tanin'i Rit ary nangataka azy hanao sonia ny taratasy izay hanomezana ilay tany ho an'ny manampahefana, saingy nolaviny izany.
Tsy misalovana ny tanin'ny valan-javaboary aho. Misy fetra mazava eo anelanelan'ny tany izay hambolenay sy ny valan-javaboary nasionaly. Nefa nanitatra ireo sisintany ireo mankany amin'ny lalana izy ireo amin'izao fotoana. Ahoana no hanantenan'izy ireo fa hanekenay izany [hamerina ny tany]? Aiza aho no hamboly ? Eto ny taniko.
Tamin'ny faran'ny taona 2018, hita fa voampanga ho nisalovana ny tany tao amin'ny Valan-javaboary Nasionaly Pha Taem i Rit ary efa notaterina tany amin'ny polisy in-telo . Mbola eo ampanapahan-kevitra ny mpitandro filaminana na hisambotra azy na tsia ary hiampanga azy.
Hafa noho ny an'ireo mponina hafa ao amin'ny tanànakely izay nanaiky nanao sonia ny antontan-taratasy ny raharahany satria natahotra ny fanenjehana izy ireo. Mbola mamboly ao amin'ny taniny izy na dia mbola tsy fantatra aza ny fotoana hampitsaharan'ny manampahefana azy amin'izany.
Raha manana fangoraham-po amin'ny mahantra izay manana fitadiavam-bola mendrika ny governemanta dia tokony hamaha ny olana izy ireo mba ahafahan'ny mponina ao an-tananakely mamboly amin'ny taniny. Tokony hametraka fetra mazava izy ireo mba ahafahan'ny mponina miara-miaina amin'ny ala
Tanànakely manana ny tantarany
Efa nanomboka hatramin'ny taona 1858 ny tantaran'ny tanànakelin'i Ta Mui talohan'ny niitarany ho vondrom-piarahamonina lehibe kokoa ary nankatoavina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 1927 ho toy ny tanànakely ara-dalàna ao anatin'ny zana-paritr'i Huay Yang. Taorian'izay dia lasa zana-paritr'i Huay Phai ao amin'ny distrikan'i Khong Chiam ao Ubon Ratchathani izy. Ahitana tokantrano miisa 120 mahery ankehitriny ao amin'ny tanànakely.
Nambara fa ala voaaro ny alan'i Dong Phu Lon tamin'ny taona 1973 talohan'ny nanambarana azy ho Valan-javaboary Nasionaly Pha Taem tamin'ny taona 1991.
Nahatsiaro ny fotoana tamin'ny 40 taona lasa i Sot Chansuk, mponina ao Ta Mui, 66 taona, raha nisy ady nahery vaika tany Laos mpifanolo-bodirindrina amin'izy ireo. Noho ny tahotra sao ho tonga manerana an'i Mekong ny ady dia nifindra avy tao an-tanànakely Ta Mui akaikin'ny renirano nankany an-tendrombohitra ny fianakaviany.
Nampiany ihany koa fa taorian'ny nanambarana an'i Pha Taem ho valan-javaboarim-pirenena dia nanao fanisana momba ny fananan-tany ny lehiben'ny valan-javaboary tamin'izany fotoana izany ary nanome toky ireo mponina fa hosarahana amin'ny valan-javaboary ny tanimbolin'izy ireo. Saingy tsy natao an-tsoratra velively io fifanarahana io.
Nanatontosa fanisana hafa ny tompon'andraikitry ny Valan-javaboary Nasionaly Pha Taem tamin'ny taona 2016 tamin'ny alàlan'ny fampiasana sary avy eny amin'ny zana-bolana ary nangataka ireo mponina manan-tany ao amin'ny ala mba hiala ny faritra.
Noho ny tsy fahalalana firy momba ny lalàna dia nanao sonia ny antontan-taratasy kanefa tsy nahatakatra ny fiiafaran'izany i Sot sy ny mponina maro hafa ao amin'ny tanànakely.
Mbola narovana mafy ny tanin'i Sot mba hanakanana ny ombivavy sy ny ombidia tsy hanimba ny voliny izay misy manga, voamadilo ary mahabibo nambolen'ny ray aman-dreniny ary mbola ireo no loharanom-bola hiveloman'ireo fianakaviana.
Na dia mamokatra aza ny vokatry ny tany dia tsy mbola mampidi-bola ampy ho an'ny fianakaviana izany. Lasa nitady trondro tao amin'ny reniranon'i Mekong i Sot taorian'ny fotoam-pijinjana saingy nilaza izy fa tsy mitovy toy ny teo aloha ny renirano.
Chula Chansuk, na “Ko” manjono ao amin'ny reniranon'i Mekong ao amin'ny distrikan'i Khong Chiam ao Ubon Ratchathani. Saingy matetika no foana ny haratony. Saripika sy fanazavana avy amin'i The Isaan Record
Nihena ny trondro ao Mekong
Mpanjono ao amin'ny tanànakelin'i Ta Mui ihany koa i Cula ahalahin'i Sot. Mamelona ny maoteran'ny sambo keliny izy isa-maraina, ary lasa mandeha mizaha raha toa ka nahazo trondro ny fanjonoany. Saingy tapa-kazo sy fako matetika no mba azon'ny haratony amin'ny ankamaroan'ny fotoana .
Nilaza i Chula fa folo taona lasa izay, hafa ny haavon'ny rano tao amin'ny reniranon'i Mekong. Ny fananganana ny tohodrano Shinoa izay nanakana ny rano dia nanimba ny haavon'ny rano ka nanakorontana ny fihinana sy ny fanatodizan'ny trondro .
Nahazo an'arivony maromaro manodidina ny 10 000 baht [327 Dolarà amerikana] izy taloha rehefa manjono mandritra ny vanim-potoana fiakaran'ny rano . Saingy tsy rototra firy ntsony amin'ny fanjonoana ny olona ao amin'ny tananakely amin'izao fotoana izao .
Mahazo trondro hamidy ianao taloha kanefa amin'izao andro izao dia zara raha afaka mamelo-tena amin'ny fanjonoana izahay .
Nahita ny fanadihadiana nataon'ny UNESCO tamin'ny taona 2017 fa nisy fiantraikany lalina tany amin'ny faritra ambany, indrindra eo amin'ny lafiny fiarovana ara-tsakafo avy amin'ny fambolena sy ny jono ny fanelingelenana vokatry ny atsanga mikoriana mankany amin'ny lembalemba any Mékong, indrindra fa nandritra ny fanorenana ny tohodrano miisa 11 ao amin'ny Reniranon'i Mekong.
Mamboly i Chula rehefa tsy mahita trondro ao anaty renirano. Toa an'i Rit rahalahiny, nilaza taminy ny manampahefana fa ao anatin'ny Valan-javaboarim-pirenena Pha Taem ny taniny saingy nanantitrantitra i Chula fa azy ny tany talohan'ny tsy mbola nanambarana akory io valan-javaboary io.
Fandravana ny antsasaky ny trano
Iray kilometatra latsaka kely miala ny tanànakelin'i Ta Mui no misy ny tanànakely Tha Long, ao amin'ny distrikan'i Khong Chiam ihany koa, izay nilazan'ny manampahefana fa mponina miisa enina no voarohirohy amin'ny fisalovanana tany.
Anisan'izy ireo ny fianakavian'i Kongpat Wonglakorn sy ny vadiny Lai Sirimat. Nandritra ny fanadihadiana natao momba ny tany, nilaza tamin'izy ireo ny tompon'andraikitry ny valan-javaboary fa milamina ny zava-drehetra saingy nilaza izy ireo taty aoriana fa voatery handrava ny antsasaky ny tranon'izy ireo izy ireo.
Notenenin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny valan-javaboary handrava ny antsasaky ny tranony i Kongpat Wonglakorn, 54 taona satria nisalovana ny tanin'ny valan-javaboarim-pirenena izany. Saripika sy fanazavan'i The Isaan Record
Nilaza i Kongpat hoe:
Nasainy izahay ihany no handrava izany. Raha tsy manao izany izahay hpy izy ireo dia izy ireo no hanao azy ary mety hosamborina izahay. Nilaza izy ireo fa mety hampandoavina onitra izahay ary halefa any am-ponja.
Nitondra sary avy amin'ny zanabolana ho an'ireo mponina ny tompon'andraikitra hijerena izany ary nilaza tamin'i Kongpat fa nihoatra ny Valan-javaboarim-pirenena Pha Taem ny antsasaky ny tranony.
“Nilaza izy ireo araka ny sarintany fa eto izany no mihodina ,” hoy izy, sady nanondro ny sarintany tamin'ny rantsan-tanany .
Tsy azoko fa tena vaky ny lohako. Ahoana no ahafahany mandrava izany? Tsy manan-trano hipetrahana aho. Tsy mpampiasa vola manankarena izahay. Vahoaka mahantra izahay.
Araka ny tatitra nataon'ny polisy avy ao amin'ny biraon'ny polisy Khong Chiam any Ubon Ratchathani, voampanga ho nisalovana tany i Lai araka ny Lalàna mifehy ny Ala tamin'ny taona 1941, ny Lalànan'ny Valan-javaboarim-pirenena tamin'ny taona 1961 ary ny Lalàna momba ny Ala Voaaro Nasionaly tamin'ny taona 1964 satria nifanindry tamin'ny Ala Voaaron'i Dong Phu Lon any avaratra ny ampahany tamin'ny tany ao amin'ny Valan-javaboarim-pirenena Pha Taem.
Mandritra izany fotoana izany, nilaza i Nakarin Sutatto avy ao amin'ny Valan-javaboarim-pirenena Pha Taem ao Ubon Ratchathani fa hatramin'ny nametrahana ny politika famerenana ny ala tamin'ny taona 2015 dia sombin-tany miisa 41 no hita fa niditra tao amin'ny tany misy ny valan-javaboary. Nampiseho sarintany avy amin'ny zanabolana ny manampahefana ho porofo fa nisalovana ny tany ireo mponina taorian'ny taona 2015, ka nahatonga ireo mponina sasany tao an-toerana voatery namerina ny taniny .
Tsy te hanenjika ireo mponina izahay, kanefa tsy maintsy misambotra ireo mpisalovana izay tsy manaiky hamerina ny tany izahay. Miandry ny mpampanoa lalàna izahay hanapa-kevitra ny hanenjehana azy ireo na tsia.
Tamin'ny volana Novambra 2017, nametraka fitarainana tany amin'ny Foibe Damrongdham any Ubon Ratchathani ny mponina sasany mba hitady rariny. Nanangana komity mpanao fanadihadiana ny governoran'i Ubon Ratchathani tamin'izany fotoana izany mba handinika ny sisintany eo amin'ireo tanànakely telo voakasik'izany, toa an'i Tha Mui sy Tha Long.
Tsy tokony ho voakasika ireo mponina
Nilaza ny mpitondratenin'ny Minisiteran'ny Harena Voajanahary sy ny Tontolo Iainana, Sophon Thongdee tamin'ny antsafa fa nifantoka tamin'ny famerenana indray ny tany avy amin'ny mpandraharaha sy ny olona izay nitrandraka fotsiny ny tany mba hahazoana tombony ara-barotra ny governemanta fa tsy ireo mponina olon-tsotra akory. Haverina amin'ny laoniny ny tany ary nambolena hazo aorian'ny fitakiana.
Mila mitady fomba hanampiana an'ireo izay nivelona teo amin'ny tany talohan'ny nanambarana ireo faritra ho ala izahay. Miandry ny torolàlana izahay hamahana ny olana amin'ny fomba maharitra, fa tsy ny mponina kosa no tena ifantohana amin'io politika io.
Nampiany ihany koa fa nahazo baiko avy amin'ny praiminisitra ny minisitra mba hampifanaraka ny politika ho “mety kokoa ho an'ny olona.” Nangataka ny fampahalalam-baovao izy ireo mba tsy hiantso ny politika hoe “famerenana ny ala” satria misy fiantraikany ara-tsaina izany ary tsy mifanaraka loatra amin'ny “tsara ho an'ny olona. “